Puntland oo Maanta soo bandhigtay Ciidamo gaar ah – GEELLE MAG
Maamul Goboleedka Puntland ayaa Maanta Magaalada Garoowe waxaa ay kusoo bandhigeen Ciidamo gaar ah oo la magac baxay tayeynta ammaanka Caasimadda Maamul Goboleedka Puntland ee Magaalada Garoowe.
Wasaaradda Amniga Puntland iyo Saraakiisha Ciidamada ayaa waxaa ay sheegeen in ay ciidamada bilaabi doonaan howlgallo ka dhan ah dadka hubka sharci darrada ah ku dhex wato Magaalada Garoowe iyo dhalinyarada ku howlan falalka lidiga ku ah Ammaanka.
Wasiirka Wasaaradda Amniga Puntland Cabdi Samad Maxamed Galan ayaa sheegay in Ciidamadan iyo Saraakiishoodaba laga soo xulay Ciidamada kala duwan ee Puntland, isla markaana uu rajeynayo in ay gudan doonaan waajbaadkooda, balse looga baahan yahay in howsha loo igmaday cidnana ugu turin.
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Sarreeye Gaas Muxudiin Axmed Muuse ayaa sheegay in Ciidamadaan laga doonayo in aysan rasaasta si micno-darro ah ku ridin, isla markaana askarigii amar la’aan xabad rida wixii ka dhasha uu isaga mas’uuliaydeeda qaadi doono.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa intaasi kusii daray in Ciidamadaan looga baahan yahay in ay si daacad ah ugu adeegaan Shacabkooda, waxaana uu ku amray in cid alaala cidii qori ku dhex qaadata Magaalada Garoowe ay ka qaadaan.
Goobtaas Maanta Maamulka Puntland ay Ciidamada gaarka ah kusoo bandhigtay ayaa waxaa ku sugnaa Duqa Degmada Garoowe, Guddoomiye ku-xigeenka Gobolka Nugaal, taliyeyaasha ciidamada booliska, Daraawiishta iyo wasiirka amniga Puntland.